Dị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Raara Onwe Granulator Ngwa Ngwa na |lọ Ọrụ | YiZheng
Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator a na-eji na-granulate udi akụkụ ahụ ozugbo site na iji nile di iche iche nke organic okwu mgbe gbaa ụka na-azọpịa.
Gịnị bụ New Type Organic Fatịlaịza Granulator?
Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator a na-ejikarị ya na granulation nke fatịlaịza organic. A ọhụrụ ụdị organic fatịlaịza granulator, makwaara dị ka mmiri agitation granulation igwe na esịtidem agitation granulation igwe, bụ ọhụrụ ọhụrụ organic fatịlaịza granulator mepụtara anyị ụlọ ọrụ. Igwe nwere ike ọ bụghị naanị ịkọ ọtụtụ ihe dị iche iche, karịsịa maka ihe ndị na-adịghị mma nke na-esi ike ịnweta site na ngwa ngwa, dị ka ahịhịa ọka, ihe fọdụrụ na mmanya, ihe fọdụrụ na ero, ọgwụ fọdụrụ, nsị anụmanụ na ihe ndị ọzọ. The granulation nwere ike mgbe gbaa ụka, na ya nwekwara ike na-enweta mma mmetụta nke ọka Ndinam ka acid na ọchịchị sludge.
Ebee ka a pụrụ inweta nri fatịlaịza?
Fatịlaịza Organic Fatịlaịza:
a) Ulo oru ulo oru: dika nkpuru distiller, nkpuru mmanya, ahihia ahihia, ihe ndi ozo, ahihia ahihia, wdg.
b) Sludge nke obodo: dika sludge nke mmiri, sludge, wdg. Organic fatịlaịza akụrụngwa mmepụta na ọkọnọ isi nhazi ọkwa: silkworm ájá, ero fọduru, kelp fọduru, phosphocitric acid fọduru, akpu fọduru, protein mud, glucuronide residue, amino acid humic acid, mmanu mmanu, ahihia ahihia, uzuzu uzuzu, na-aru oru n'otu oge, ahihia shei ntụ, wdg.
a) Ifu ahihia: dika ahihia ahihia, nri soybe, na owu, wdg.
b) Anumanu na nsị anụ ọkụkọ: dị ka nri ọkụkọ, ehi, atụrụ na ịnyịnya, nri oke bekee;
c) Ihe mkpofu ulo: dika ahihia nke kichin;
Kpụrụ Ọrụ nke Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator
Na ọhụrụ ụdị organic fatịlaịza granulator na-eji n'ibu akpali ike nke elu-agba adiana na aerodynamics n'ihi na ya na-nọgidere mix, granulate, * Tụkwasị na, ok na ndị ọzọ na Filiks nke ezi ntụ ntụ na igwe, iji nweta granulation. Particgwa urughuru bụ * Tụkwasị na, na urughuru nke bụ n'ozuzu n'etiti 1.5 na 4 mm, na urughuru hà 2 ~ 4.5mm bụ ≥90%. Na urughuru dayameta nwere n'ụzọ kwesịrị ekwesị gbanwee site na ihe onwunwe inggwakọta na spindle ọsọ. Ọtụtụ mgbe, obere ngwakọta agwakọta, nke dị elu karịa ntụgharị ọsọ, obere mkpụrụ ahụ, na nnukwu urughuru ahụ.
Akụkụ nke Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator
►Ngwurugwu ngwaahịa a bụ bọl gburugburu.
►Ngwurugwu nwere ike ịdị elu na 100%, mee ka gran gran dị ọcha.
►Organic ihe onwunwe nwere ike tolite n'okpuru a ụfọdụ ike, ọ dịghị mkpa ka ịgbakwunye ihe nragide. mgbe granulating.
►Ngwurugwu ngwaahịa dị oke, ọ nwere ike ịgbanye ozugbo granulation belata ume. oriri nke ihicha.
►Mgbe gbaa ụka organics adịghị mkpa ọkpọọ, mmiri nke akụrụngwa nwere ike ịbụ na. 20% -40%.
Nkà na ụzụ Organic Fatịlaịza Granulation Production Line
Iji mezuo mkpa nke nnukwu fatịlaịza organic, ANY Zhengzhou Yizheng Arọ Machinery Co., Ltd. ndị ọkachamara na-arụpụta ọrụ na imepụta ahịhịa na-emepụta fatịlaịza na igwe dị mkpa dabara adaba maka ihe ndị ọzọ dị iche iche, nke bụbu onye ndu n'ọhịa na China.
Mmepụta Kwa Afọ nke Osisi Fatịlaịza Organic Siri Ike (300 ụbọchị ọrụ)
10,000 tọn / afọ
20,000 tọn / afọ
30,000 tọn / afọ
1.4 tọn / awa
2,8 tọn / awa
4.2 tọn / awa
Mmepụta Kwa Afọ nke Osisi Fatịlaịza Ọkara
50,000 tọn / afọ 60,000 tọn / afọ 70,000 tọn / afọ 80,000 tọn / afọ 90,000 tọn / afọ 100,000 tọn / afọ
6.9 tọn / awa 8.3 tọn / awa 9.7 tọn / awa 11 tọn / awa 12.5 tọn / awa 13.8 tọn / awa
Mmepụta Kwa Afọ nke Osisi Fatịlaịza Organic buru ibu
150,000 tọn / afọ 200,000 tọn / afọ 250,000 tọn / afọ 300,000 tọn / afọ
20.8 tọn / awa 27.7 tọn / awa 34.7 tọn / awa 41.6 tọn / awa
Enweghi ike mgbochi oge na obere ego na-efu Aerobic gbaa ụka
"Gbanwee ihe mkpofu n'ime akụ", enweghị ọgwụgwọ rụrụ arụ, ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ
Short mmepụta okirikiri nke organic fatịlaịza
Simple ọrụ na adaba njikwa
Usoro ọrụ nke Organic Fatịlaịza Production Line
Usoro gbaa ụka:
Gbaa ụka bụ usoro bụ isi maka imepụta ihe. Mmiri, okpomọkụ na oge kwesịrị ka a chịkwaa ya. Compost Turner bụ organic fatịlaịza igwe ji mee ngwangwa gbaa ụka nke micro-ntule na melite ogo compost.
A ga-echiasị ihe ndị na-eme achịcha ọka mgbe usoro ịgba ụka. O siri ike iji aka gị mee ka ihe ahụ ghọọ nsogbu. N'ụzọ dị otú a, ọ dị mkpa iji fatịlaịza fatịlaịza. Anyị na-akwado ndị ahịa ịhọrọ oke mmiri ihe igwe igwe, n'ihi na ọ nwere ike ịkụpịa ihe mgbochi mmiri na oke arụmọrụ.
Ọ bụ usoro mmepụta ihe dị mkpa na usoro mmepụta niile. Dika ihe di iche iche choro, enwere ike itinye nri. A na-edozi akụkụ dị iche iche, na-echekwa ọtụtụ ume. Yabụ, ịhọrọ igwe fatịlaịza kwesịrị ekwesị dị ezigbo mkpa. New ụdị organic fatịlaịza granulator bụ ihe kasị mma igwe.
Mgbe ha gụsịrị ọka, nsogbu ahụ dị mkpa nke ihicha. Mmiri nke organic fatịlaịza na-ebelata ka 10% -40%. Rotary drum dring machine bụ ngwa iji belata mmiri nke ahụ, nke ga-ekwe omume maka ịmepụta fatịlaịza organic.
Iji hụ na mma, ahụ ga-jụrụ mgbe ihicha na-enyemaka nke rotary drum jụrụ igwe.
Enwere fatịlaịza na-erughị eru nke ọma n'oge mmepụta. Ọ chọrọ Rotary drum fatịlaịza screening igwe ikewara jụrụ ngwongwo si ọkọlọtọ umi.
A na-eji igwe akụrụngwa fatịlaịza maka ịkọ nri fatịlaịza. Anyị nwere ike iji igwe akụrụngwa iji kpoo na akpa ahụ. Ị nwere ike nweta ngwaahịa ngwaahịa na-akpaghị aka na nke ọma.
New Type Organic Fatịlaịza Granulator Video Display
New Type Organic Fatịlaịza Granulator Model Nhọrọ
Grandị nkọwapụta granulator bụ 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 na nkọwa ndị ọzọ, enwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ọzọ si dị.
Akụkụ (L × W × H) (mm)
Nke gara aga: Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator
Osote: Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator
Okwu Mmalite Gịnị bụ Counter Flow Cooling Machine? Ọgbọ ọhụrụ nke Counter Flow Cooling Machine nyochara ma mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị, ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ mgbe jụrụ ajụ adịghị elu karịa ọnụ ụlọ ụlọ 5 ℃, ọnụọgụ ọdịda anaghị erughị 3.8%, maka mmepụta nke pellets dị elu, ogologo stora ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine? The Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher bụ otu n'ime ndị akacha eji ndinuak akụrụngwa na compound fatịlaịza ụlọ ọrụ. Ọ nwere ike mgbanwe maka ihe nwere nnukwu mmiri na ike na-eri nri na-enweghị igbochi. Ihe na-abanye site na f ...
Rotary Single sịlịnda Ihicha Machine na fatịlaịza ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Rotary Single Cylinder Ihicha Machine? Rotary Single Cylinder Ihicha igwe bu nnukwu ihe eji emeputa igwe eji eme ka akuku fatịlaịza mejupụtara na ụlọ ọrụ fatịlaịza. Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa dị mkpa. The Rotary Single sịlịnda Ihicha Machine bụ nkụ organic fatịlaịza ahụ na a wa ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ kwụ Fermentation tank? Igwe na-ekpo ọkụ ọkụ na nsị anụ na-agwakọta tankị na-ebugharị ọkụ ọkụ nke anụ ụlọ na anụ ọkụkọ, ihe mkpofu kichin, sludge na ihe mkpofu ndị ọzọ site na iji ọrụ nke microorganisms iji nweta ọgwụgwọ sludge zuru oke nke bụ nsogbu ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Disc Fatịlaịza igwekota igwe? Igwe diski fatịlaịza Disc na-agwakọta akụrụngwa, nke gụnyere diski agwakọta, ogwe aka na-agwakọta, etiti, ngwugwu gearbox na usoro nnyefe. Ihe e ji mara ya bụ na e nwere cylinder a haziri n'etiti etiti diski a na-agwakọta, a na-edozi ihe mkpuchi cylinder ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe? Ugboro abụọ aro fatịlaịza igwekota igwe bụ akụrụngwa na-agwakọta arụmọrụ, ogologo ogologo tank, ka mma nsị na-agwakọta. Isi akụrụngwa na ndị ọzọ inyeaka ihe na-nri n'ime akụrụngwa n'otu oge na-agwakọta uniformly, na mgbe ahụ na-ebu ndị b ...